Siyaasada Soomaaliya Dawladaha Carabta – Radio
Siyaasada Soomaaliya Dawladaha Carabta
June 27, 2017	360	2
Maxaa Soomaaliya kaga quman ama kaga aadan in ay ka yeesho siyaasadda arimaha dibada ee dallalka Carrabta? Intii aanan ka jawaabin, waxaan jecleystey in aan soo bandhigo xaqiiqda dhabta ah ee tusineysa, siyaasadda wadamadda Carabta ee jirta maanta. Aniga oo ka fiirinaya xagga dagaaladii ay galeen ha ahaadeen mid militari ama mid diblomaasiyadeed.
1960 kii ciidammadii habaysnaa ee dalka masar waxay ku guul dareysteen in ay ka guuleystaan jabhadihii iyo maleeshiyaadkii Dalka Yemen ee ay dagaalka la galeen.
Dalka Bahrain markii ay ka dheceen banaanbaxyo Shiicada dalkaas ay qaban qaabisay waxaa loo diray 130,000 ciidamo sacuudiyiin ah, si loo badbaadsho boqortooyadii dalka Bahrain.
Dalka Yemen oo ay Shiicada Xuutiyiintu ka yihiin wax aad u tiro yar, nacayb ay dalalka khaliijku u qabeen Suniyiinta Akhwaan Muslimiinta dartood waxaa ay garab siiyeen xuutiyiinta oo ay islahaayeen waad koontarooli kartiin maadaama ay yihiin niman laga tiro yaryahay. Laakiin kolkay xoogeysteen xuutiyiintii waxay xiriir la xirteen Iiraan isla markaana dalkii Yemen uu gacanta u galay shiicada Iiraan.
Waa laba mowqif oo kala gedisan difaaca dal iyo dad iyo difaaca reer ka taliya dalka. Mida labaadna waxaa weeye dawladda Mareykanka oo rabta in ayadda mar walba ku xirnaato jiritaanka iyo difaaca dawladaha Khaliijka iyo kuwa batroolka haysta oo dhan. Waxa ku dhaca kii madaxa yara taaga sida (Libya oo damacday lacag dahab ah in ay sameysato) iyo (Qatar oo Idaacada Al Jazeera ee madax banaan sameysatay) ayaa tusaale kuugu filan.
Haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliyeed in ay ka yeesho Siyaasada Dallalka Carrabta ee faashilka ah, is bedbedelka badan isla markaana aan la isku haleyn karin. Waxaa kaliya oo Soomalidu ay ka yeeli karto waxaa ugu muhiimsan in ay ka yeesho sida ugu dhibka yar taas oo ah in ay ka yeesho sida dalka Mareykanka iyo Turkigu ay ka yeelaan. Taas oo ah in wadankii ay xiriirka u jaraan, ay Soomaaliduna xiriirka u jarto, wadankii aysan xiriirka u jarina labaddaas wadan ay iska deyso.
Musharixxiintioi ugu Badnaa oo Halmar wada tanaasulay iyo Lacagtii Diiwan galinta $20,000 oo noqotay mid…
January 6, 2019	730	Like
Cali Yufus Xoosh iyo Gaas. (Lud hore laqanyadeed)
January 2, 2019	224	1
Bisha Cas oo raadinaysaa qandaraasle Haan biyood ka dhisa ceelka tuulada Kuweyt.
December 29, 2018	114	1
Request for Construction of 1 Elevated Tank for Community Borehole.
December 29, 2018	124	Like
November 22, 2018	163	1
Xoosh oo Si Fudud u Raali Geliyey Xildhibaanada Baarlamaanka
Wasiirka Dastuurka Federaalka Soomaaliya Cabdireaxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta hortegey Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, kadib ...